Malunga nathi -Shenzhen M-Queen Electronics Co., Ltd.
INkulumbuso yeBhanki yamandla
IBhanki yaMandla engenazingcingo
Ukutshaja ngokukhawuleza iBhanki yaMandla
IBhanki yokuKhanya yokuKhanya
Izipho itshaja engenazingcingo
Ukuma kwetshaja engenazingcingo
I-Bamboo kunye neshaja engenazingcingo yomthi
Ukujikajika kweFlash drive
I-LED ekhupha i-logo ye-USB Drayivu
I-bamboo kunye neWood USB Drayivu
I-PVC USB Flash Drive yesiqhelo
Isikhululo sokutshaja sePS5
IJoyCon yeNintendo switch
I-M-Queen Electronics ijolise ekwenziweni kwebhanki yamandla, itshaja engenazingcingo, i-USB flash drive kunye nezixhobo zemidlalo. Isebenze kwimveliso ye-elektroniki yabathengi yepremiyamu kunye nezipho kangangeminyaka eli-17 ukusukela ngo-2004. UM-Queen uthatha izixhobo zokwenza phambili kunye nezixhobo zokwenza izinto kunye nenkqubo yolawulo esebenzayo ukunceda abathengi behlabathi ngamaxabiso aphantsi kunye nomgangatho ophucukileyo. Ukunceda abathengi ekuboneleleni ngeenkonzo ezisemgangathweni zabathengi be-elektroniki, uM-Queen ubonelela ngesisombululo esineendleko esinye sokumisa ukusuka kwimbono ukuya ekuzisweni.
Kwizinto zombane zabathengi, iindlela zentengiso ngayo yonke into. Kungenxa yoko le nto, e-M-Queen, siqhutywa kukuqhubeka nokulandela amanqanaba aphezulu omgangatho. Ukuthembela kuphuculo oluqhubekayo kunye namandla okwenza imveliso, uyilo lwe-M-Queen, luyaphuhlisa, luvelisa kwaye luhlanganise nayiphi na ibhanki yamandla, itshaja engenazingcingo, i-USB flash drive kunye neeprojekthi zezincedisi zomdlalo, ezenza kanye oko abathengi bakucingayo, kudala ngokweemfuno zabathengi ezithile kwaye imigangatho engqongqo endlwini.
Kwi-M-Queen, asiboneleli kuphela ngeentengiso eziphezulu, kodwa sisebenza ngolwazi lobungcali ukuzisa into eyongezelelweyo etafileni- iliso lokungalindelekanga, intlantsi yenkuthazo. Ngumlingo onamandla okutsala abathengi behlabathi kunye nokuziphuhlisa rhoqo.
UM-Queen okwangoku useke indibano yocweyo yokuvelisa egubungela indawo engaphezulu kwe-5,000 yeemitha zesikwere, ithatha imeko yezixhobo zemveliso yobugcisa kunye nomsebenzi wokutshatisa ibhanki yamandla yamva nje, itshaja engenazingcingo, i-USB flash drive kunye neenkonzo zezincedisi zomdlalo, ngelixa iqela lethu elinetalente Ndonwabile ukuba liqabane lakho, inika inkqubo ekulula ukuyisebenzisa yokusebenzisa iikowuteshini eqinisekisa ingxelo yexesha kubathengi behlabathi.
Ungaze emva kwexesha ufumane, joyina u-M-Queen ngamava angcono. Siyayazi indlela osebenza nzima ngayo, makhe siphathe iintloko zokubonelela ngeemveliso ezisemgangathweni, emva koko unokujonga kwinto oyenzayo.
Nazi ezinye zezizathu zokuba sikhethe:
1. Uluhlu olubanzi lokhetho lweemveliso eziphathwayo, ezibandakanyiweyo kodwa ezingaphelelanga kwiibhanki zamandla ezahlukeneyo, itshaja engenazingcingo, i-USB flash drive kunye nezinto zomdlalo.
2. U-M-Queen usebenzisa ngokungqongqo uthotho lwemigangatho yomgangatho, okt i-CE, i-FCC, i-RoHS, i-UL, i-ETL kunye ne-ISO njl.njl.
3. Iisampulu zasimahla ziyafumaneka.
4. Iimveliso zihlala zihlolwe nge-100% ngaphambi kokupakisha.
5. Yamkela iodolo encinci, ixesha lokuhambisa ngokukhawuleza kwiodolo efanelekileyo.
6. Unamava okwenza ushishino nabathengi abakhulu eMntla Melika naseYurophu.
Kutheni ungasebenzi kunye noM-Queen Elektroniki?